सरुवा रोग – Health Post Nepal
केही वर्षअघिदेखि मात्र जानकारीमा आएको स्क्रब टाइफस पछिल्ला दिनमा नियमितभन्दा भिन्नखालका लक्षण लिएर अस्पताल पुगेका बिरामीमा समेत देखिन थालेको छ । डरलाग्दो गरी फैलिरहेको यो रोग यही गतिमा फैलिरहे विकराल समस्या बन्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार पछिल्ला दिनमा स्क्रब टाइफसको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्षका रूपमा यस रोगका बिरामीमा फरक–फरक र अकल्पनीय लक्षणहरू देखा परिरहेका छन् । उनका अनुसार उच्च ज्वरो, टाउको दुख्नु, आँखा रातो हुनु, लिम्फ ग्रन्थि सुन्निनु, पसिना बढी आउनु, छालामा कालो धब्बा देखिनु यसका नियमित र साझा लक्षण हुन् । ‘पछिल्लो समय झाडापखाला भएर आउने बिरामीमा पनि यो रोग प्रमाणित भएको छ,’ पुनले भने, ‘यसरी नयाँ–नयाँ लक्षण देखिनु र सर्वसाधारण र सरकारले पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिनु खतरापूर्ण साबित हुन सक्छ ।’
सामान्य ज्वरोको जस्तै लक्षण देखिने स्क्रब टाइफस अहिले तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने केही वर्षमै यसले भयावह रूप लिने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार राजधानीका विभिन्न अस्पतालमा प्रत्येक दिन करिब ५ देखि ६ जना बिरामीमा स्क्रब टाइफस पोजिटिभ देखिएको छ । परीक्षणमा आएभन्दा बाहेक पनि ठूलो संख्यामा यसका संक्रमित रहेको चिकित्सकको अनुमान छ ।
सामान्य ज्वरोको जस्तै लक्षण देखिने स्क्रब टाइफस अहिले तीव्र गतिमा फैलिरहेको र यदि यस्तै रहने हो भने केही वर्षमै यसले भयावह रूप लिने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ ।
सन् २०१५ मा धरानमा ७ बालबालिकाको शंकास्पद मृत्यु भएपछि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, टेकुले विस्तृत अनुसन्धान गरेपछि मृत्युको कारण स्क्रब टाइफस रहेको खुलेको थियो । तर, त्यसभन्दा धेरै वर्षअघिदेखि नै यो रोगको संक्रमण भएको अनुमान छ । सन् २००४ मा प्रकाशित हेल्थ बुलेटिनमा करिब ३.२ प्रतिशत ज्वरोका बिरामीमा यो रोगको संक्रमण रहेको उल्लेख छ । तर, रोग प्रमाणित भएको भने धरानमा बालबालिकाको मृत्यु भएपछि नै हो ।
सन् २०१५ पछिका ३ वर्षमा यो रोग यति द्रुत गतिमा फैलिएको छ कि अहिले हरेक ज्वरोका बिरामीमा यसको आशंका र परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको डा. पुनको भनाइ छ । जसरी विगतमा ज्वरो आउनासाथ टाइफाइड हुन सक्ने आशंका र त्यसको रोकथामका लागि सचेत हुनुपर्ने अवस्था थियो, त्यही स्तरमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण पुगिसकेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
सामान्य परीक्षणबाट पत्ता लाग्ने र सामान्य औषधिले निको हुने यो रोग पहिचान हुन नसकेमा शरीरका विभिन्न अंगमा जटिलता आउने र ३० प्रतिशतसम्म मृत्युको सम्भावना हुने गरेको छ ।
माइट नामक आँखाले देख्न नसकिने, (०.४एमएम)साइजको किर्नाको टोकाइबाट यो रोग सर्ने गर्दछ । यो किर्ना मुसाको शरीरमा बस्न रुचाउने हुनाले मुसा बढी हुने ठाउँमा यसको संक्रमण हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ ।
इडिसिडीको प्रोटोकलअनुसार टक्सिसाइक्लिन नामक औषधि ५ देखि १० दिनसम्म सेवन गर्दा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ भने ८ वर्षमुनिका बालबालिका तथा गर्भवती महिलाले एक मात्रा एजिथ्रोमाइसिन सेवन गरेपछि रोग निको हुन्छ ।
गाउँमा खेतबारीमा काम गर्ने, जंगल जाने महिला तथा बालबालिका यो रोगको जोखिममा छन् । त्यसैगरी, सहरमा पनि जंगली क्षेत्रवरिपरि घुमफिर गर्ने मानिसमा यो रोग संक्रमणको सम्भावना बढी हुन्छ ।
वर्षायामका ४ महिनामा यो रोगको जोखिम बढी हुने गर्छ । विगत ३ वर्षमा यसको संक्रमण अत्यधिक बढेको छ । नेपालमा मात्र नभई छिमेकी देश भारतमा पनि यो रोगको संक्रमण पछिल्लो समय निकै बढिरहेको छ ।
Posted in खबर, मुख्य खबरTagged सरुवा रोग, स्क्रब टाइफसLeaveaComment on अकल्पनीय लक्षणसहित फैलिँदै छ स्क्रब टाइफस